Wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato kaluunka Fanfin ama jinka bada | Kalluunka
Jarmal Portillo | | Kalluunka
Waxaan horey uga soo qornay kalluun aad u yaab badan oo ku nool moolka ugu hooseeya ee badda ee loo yaqaan kalluunka. Maanta waxaan la laabaneynaa kalluun kale oo dhif ah si aan ugu darno liiskayaga kalluunka dhifka ah.
Waxay ku saabsan tahay kalluunka Fanfin ama sidoo kale loo yaqaan jinka badda. Kalluunkan, sida kalluunka loo yaqaan 'monkfish', maadaama ay isku nidaam yihiin, wuxuu ku nool yahay moolka badda, in ka badan ama ka yar qiyaastii 1.000 mitir (gaaraya qoto dheer 3.000 mitir), oo ay iska leeyihiin qoyska Caulophrynidae iyo amarka Lophiiformes iyo maxaa kari kara hel inaad cabirto ilaa 25 cm adoon xisaabin fiilooyinkeeda waaweyn iyo anteenooyinkooda. Marabtaa inaad waxbadan ka ogaato kalluunkan cajiibka ah?
1 Kalluunka Fanfin ama jinka badda
2 Astaamaha kalluunka Fanfin
3 Fanfin galmada galmada
Kalluunka Fanfin ama jinka badda
Kalluunka bad-weynu waa mid shisheeye oo qaab-dhismeedyo aan badnayn ku badan biyaha moolka dheer maxaa yeelay waa inay la qabsadaan meelaha qorrax madoobaad dhacdo ama dhacdo dhacdo. Fiilooyinka waaweyn iyo anteenooyinku waxay u adeegaan kalluunka si ay u awoodaan inay u dhex maraan meelaha moolka dheer iyagoo aan u baahnayn iftiin.
Waxaa loogu yeeraa jinni badeed muuqaalkiisa cabsi badan darteed. Sida kalluunka kalluunka loo yaqaan 'monkfish', kalluunka Fanfin wuxuu leeyahay muuqaal aan saaxiibtinimo lahayn oo weliba khatar ah. Waxaad dhihi kartaa waa nin xoog badan oo ka soo jeeda moolka yaamayska.
Kalluunkan waxaa lagu gartaa inuu ka mid yahay kalluumeysatada. Kalluunkan ayaa ah kuwa lagu gartaa inuu yahay mid jilicsan oo jilicsan. Taasi waa in la yiraahdo, iyagu waa kalluun awood u leh inuu ku noolaado meel aan aad uga fogeyn dusha sare, isla markaana, sidoo kale, ku nool qoto dheer.
Astaamaha kalluunka Fanfin
Kalluunka Fanfin waa ugaarsadeyaal waaweyn oo badda ah waxayna deggen yihiin moolka Badweynta Baasifigga, Hindiya iyo Atlaantik. Inay awood u yeelato ugaarsiga ugaadhsiga ay haysato xubin bioluminescent ah oo loo isticmaalo sidii sed. Sida kalluunka loo yaqaan 'monkfish', xubinkani wuxuu u soo baxaa natiijo ahaan isku-dhafnaan leh bakteeriya awood u leh isku-darka isku-dhafka kiimikada ee dhaliya noolaha. Sifooyinka kalluunka loo yaqaan 'monkfish' iyo 'Fanfin fish' waa kuwo aad isugu eg, maaddaama ay ka tirsan yihiin isku amar, the Lophiiformes
Kalluunkan waa in loo diyaar garoobaa inuu ku noolaado deegaanno leh qorrax yar iyo nafaqooyin yar. Waxa jira hadhaar kalluun oo gaadha badda hoosteeda oo ay soo jiidatay cuf isjiidjiidku, laakiin kuma filna inay quudiyaan kalluunkan. Thanks to anteenooyinkooda iyo fiilooyinkooda, kalluunka Fanfin waxay awoodaan inay ogaadaan qaab-dhismeedka dhulka meelahaas qoto dheer ee aan iftiinku ka jirin.
Marka laga hadlayo xubinta loo yaqaan bioluminescent, uma adeegsado inay isku iftiimiso sida toosh, laakiin taa badalkeeda waxay u isticmaashaa soo jiidasho ugaadhsade. Kalluunku wuxuu iftiin ku arkaa mugdiga oo aakhirka wuu ku hagayaa. Markuu ugaadhsigu ku dhow yahay kalluunka Fanfin, wuxuu awoodi doonaa inuu soo ogaado mahadnaqdiisa fiilooyinkiisa iyo anteenooyinkooda si uu u weeraro oo u cuno.
Habkan nololeed ee aadka u adag ee ay ku adag tahay wax nafaqooyin ah, oo aan lahayn sawir-qaade ama plankton ayaa xayawaankan u oggolaaday inuu soo saaro qaab-dhismeedyo gaar ah (sida anteenooyinka, fiilooyinka iyo xubnaha bioluminescent) si ay u noolaadaan oo ay ula qabsadaan. Kalluunkani waa mid mudan in la ogaado oo la barto maadama ay naadirnimadoodu na siin karto macluumaad badan oo ku saabsan hab nololeedka halkaas ka jira ee moolka dheer.
Fanfin galmada galmada
Qaabka taranka kalluunka Fanfin waa mid xiiso badan. Waxay ku tarmayaan dimorphism jinsi waana wax la xoojiyay. Tan macnaheedu waa in labka iyo dheddigga ay aad u kala duwan yihiin. Sida noocyo badan oo xayawaan ah, labku aad ayuu uga yar yahay cabirka kan dumarka (tusaale ahaan, tani waxay ku dhacdaa caarada).
Inta lagu jiro marxaladda dirxiga, labka iyo dheddigga waxay u nool yihiin si xor ah, laakiin markay gaadho qaan gaar, sida kalluunka digaagga, labku wuxuu noqdaa dulin dumarka. Ragga ayaa noqda unug xubin dheeri ah oo dheddig ah waxayna noqon doonaan kuwo ka taxadara.
Sababta kalluunkani u leeyahay qaabkan astaamo ee taranka waa sababta oo ah moolka qoto dheer ayey aad u adag tahay in la helo lamaane. Sidan oo kale, markii lab iyo dheddig ay is-dhalaan, labku wuxuu hubiyaa inuusan lumin dumarka noqoshada dulin sida qayb ka mid ah jirkeeda.
Qoyskan kalluunka uma baahna sida kalluunka loo yaqaan 'monkfish' ee gastronomy sababo la xiriira fiilooyinka iyo anteenooyinka. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale saameynaya saameynta isbeddelka cimilada sida kor u kaca heerkulka biyaha ama aashitada.
Sidaad u aragto, kalluunka badda hoosteeda waa mid sifo gaar ah leh oo gaar u ah duruufaha nololeed ee adag awgood. Intaas waxaa sii dheer, weli waxaa jira noocyo badan oo kalluun ah iyo nooleyaal kale oo aan la aqoonsan sababo la xiriira dhibaatooyinka ay u leedahay inay galaan meelahaas qoto dheer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Kalluunka » Jin jin
Monkfish, mid ka mid ah kalluunka ugu yaabka badan uguna xiisaha badan